सन्दीपसँगै पारस, ज्ञानेन्द्रसहित १० खेलाडी रहेको पिएसएल ड्राफ्ट आज
नेपाल लाइभ आइतबार, पुस २६, २०७७, १०:२५
काठमाडौं– पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको ड्राफ्ट आइतबार (आज) हुँदैछ। पाकिस्तानको लाहोरमा हुने ड्राफ्टबाट टिममा अनुबन्धित हुँदै कुन-कुन नेपाली खेलाडीले पाकिस्तान सुपर लिग खेल्न पाउँछन्? यतिबेला नेपाली क्रिकेट समर्थकमा जिज्ञासा बनेको छ।
साँझ हुने ड्राफ्टमा यस पटक सन्दीप लामिछाने मात्रै हैन नेपालका अन्य ९ जना खेलाडी पनि छन्। जसले गर्दा नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरुको ध्यान पाकिस्तान सुपर लिगतर्फ मोडिएको छ। यो संस्करणको पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछानेसँगै पूर्वकप्तान पारस खड्का, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कुशल मल्ल, करण केसी, सुवास खकुरेल, पवन सर्राफ, अविनास बोहोरा र आशिफ शेख छन्।
यसअघि पनि खेलेका सन्दीप भने यस पटक सबैभन्दा महंगो क्याटाेगरीमा छन्। सन्दीप प्लाटिनम क्याटोगरीमा छन्। अन्य ९ नेपाली खेलाडी भने सिल्भर क्याटेगरीमा छन्।
पाकिस्तान सुपर लिगमा इस्लामाबाद युनाइटेड, पुल्तान सुल्तान, लाहोर क्वालन्डर्स, पेशावर जाल्मी, क्वेटा ग्लाडियटर्स र कराची किंग्स छन्। सन्दीपले यसअघि २०१९ को संस्करणमा लाहोरबाट खेलेका थिए।
नेपाली खेलाडीको सम्झना कति?
इस्लामाबादले यो पटक एलेक्स हलेस, आसिफ अली, कोलिन मुनरो, फहिम अश्राफ, हुसेन तलात, मुसा खान, शादब खान र जाफर गोहार गरी आठ खेलाडीलाई रिटेन गरेको छ। त्यस्तै, कराची किंग्सले अमिर यामिन, अर्शाद इकबाल, बाबर अजाम, कोलिन इनग्राम, इमाद वासिम, मोहम्मद अमिर, शार्जिल खान र वाकास माक्सोद गरी आठ खेलाडीलाई नै रिटेन गरेको छ।
लाहोरले भने बेन डुन्क, डेविड विइस, दिलबार हुसेन, फखर जमान, हरिस राउफ, मोहम्मद हफिज, साहिन शाह अफ्रिदी र सोहल आख्तरलाई रिटेन गरेको छ। मुलतानले भने शाहिद अफ्रिदी, इमरान ताहिर, जेम्स भिन्स, खुश्दिल शाह, रिली रोसोउव, शान मासोद, सोहल तानभिर, उस्मान कदिर रिटेन गरेको छ। क्वेटाले अनवार अली, अजाम खान, बेन कटिङ, मोहम्मद हस्नाइन, मोहम्मद नवाज, नासिम शाह, सर्फराज अहमद र जाहिद माहमोदलाई रिटेन गरेको छ।
अब यी पाँच टिमले ड्राफ्टबाट बढिमा १०–१० खेलाडीलाई अनुबन्धित गर्न पाउँछन्। त्यस्तै, पेशावरले हैदर अली, कमरान अकमाल, लियाम लिभिङ्सटन, सोयब मालिक र वाहब रियाजलाई रिटेन गरेको छ। अब पेशावरले १३ खेलाडी ड्राफ्टबाट अनुबन्धित गर्नु पर्ने हुन्छ।
नेपाली खेलाडीले पाकिस्तान सुपर लिग खेल्ने सम्भावना निकै रहेको छ। सन्दीपले यसअघि नै खेलिसकेको हुँदा सन्दीपमाथि ६ टिमकै नजर छ भने पूर्वकप्तान पारस खड्कासहितको ९ नेपाली खेलाडीलाई पनि फ्रेन्चाइज टिमले अनुबन्धित गर्न सक्छन्।
पाकिस्तान सुपर लिग आउँदो फेब्रुअरी २० देखि मार्च २२ सम्म लाहोर र कराचीमा सञ्चालन हुनेछ।